Dating abantu kunye nabantwana kuba ekudalweni kuka-usapho
Kuluntu lwethu kukho stereotype ukuba yedwa inako kuphela mom. Ubawo idla iyahlala abayo unyana okanye intombi kuphela epheleleyo usapho. Eneneni ubomi wonke umntu develops ngokwahlukileyo. Abanye girls yokucinga Dating abantu kunye nabantwana. Njani okulungileyo kwaye njani ukusebenzisa oko. Ukuba ke, eyona mba, nto leyo iza uxoxwa kweli nqaku. Njengoko ubona, imeko ukuphuhlisa kwi-enjalo indlela ukuba ubonakala kwaye omnye kooyise. Ingaba kuya kukunceda kakhulu ukufumana acquainted kunye nabo, ukuseka budlelwane nabanye. Yintoni nokusilela zibe kule emangalisayo, lonely umntu. Uphi seriousness kwaye reliability.
Nangona kunjalo, ingxaki ibe zilandelayo: ndingathanda omnye abantu kunye nabantwana rhoqo ukufumana ezimbalwa, hayi forgetting ulonwabo abantwana babo. Ngenxa loneliness oppresses kakhulu. Ukuba umntu omntu omnye, abe sele agalele kakhulu ukusebenza ukubonelela yakhe engagqitywanga usapho. Mhlawumbi ibhinqa, hayi isebenza ngendlela iqela, onjalo umntu akayi kufumana yonke kuxhomekeke khondo lobungcali-mfundo lilonke. Umzekelo, imoto mechanic kuba umhla communicates kunye enkulu inani ladies, ekubeni a ubunikazi imoto. I-Pope yedwa ingafunyanwa kwi na retail outlet. Banako ngalo stylish iingubo, okanye baby ngumgubo, ukucoca iimveliso. Ilungelo mgqatswa uza ngokuqinisekileyo ukutsala ingqalelo, ukuba unayo i-injongo ukufumana ubomi iqabane lakho. Umxholo lemiyezo, name stadiums, abantwana ke playgrounds, ifilim – apha uyakwazi ukufumana widower okanye divorced umntu kunye young abantwana. Nje kufuneka, ozolisayo, jonga ixesha elide. Mhlawumbi kuhlangana kwi zonyango ziko – engalunganga tone, kodwa ukuba umntwana ngu abagulayo, baziphatha ngayo uza kukhokela Pope, ngaphandle kokuba mom ayikho apha. Ngaphezu koko, eklinikhi kulula ukuba uqhankqalazo phezulu incoko yi-ecela into malunga tshati ye-pediatrician, imeko ufolo okanye i-drug.”Umntu kunye umntwana ezama umfazi”- enjalo ads kwi-Intanethi: ngomhla we-Dating zephondo, okanye loluntu networks. Kukho specialized zokusebenza, umzekelo,”Apho dad.”Nangona igama, funda ngaphandle kukho omnye oomama kwaye zooyise ukukhulisa abantwana kwi kwezabo. I-ubunzima ngu ukubala lone a dad, hayi umzali abo”wanika unyoko ngosuku ngaphandle”kwaye waya kuba kuhamba kunye wam unyana okanye intombi.
Uninzi kusenokwenzeka ukuba, free umntu ngokwakhe thatha phulo ekufumaneni acquainted. Ilungelo nto ukwenza. Ukuba bahlala bethembekile lokuqala umfazi wakhe, abo wafa, okanye ukufumana ulwazi olutsha, umama wakhe kuba umntwana.
Oku leqela le mba
Ngexesha lokuqala glance kunokubonakala ukuba ukuthanda umntu abe yedwa, igama lalo neminyaka yobomi ngoku ezidweliswe kwi-inyengane. Abafazi kufuneka ilungiselelwe yokuba lo mntu unako ukuza kuhlasela ngoko nangoko kunye umntwana.
Ngoko ke, musa zonke
Kubaluleke kakhulu ukufumana ngokufanayo ulwimi kunye kodwa umntu. Ukuba kunokwenzeka, i-Pope uza ilunge Kuwe omiselweyo. Yonke into enye into kukuba pretty esezantsi. Nje intlanganiso kwaye uthetha nge lohlobo umntu. Mhlawumbi ngaphezu experienced kwaye unoxanduva ngaphezu kwabanye
← Kuyafana na kubekho inkqubela kwi-Brazil. Isijapani abafazi
Izizathu kutheni animelanga ukuba uye kuphumla kwi-Brazil →